जनवरी ६, २०१६
जोडी फकाउने, फसाउने, आकर्षण गर्ने कुन जिवमा नहोला ? हरेक जिवको आ आफ्नै तरिका । ब्यक्तिका त झन फरक फरक कला । तर प्राय अलि तरुनो, खाइलाग्दो, झिल्के, मिठो बोल्ने, संरक्षण गर्नेसित स्त्रीहरु बढि नजिकिने, रुचाउने गर्छन्...
डिसेम्बर १४, २०१५
ददि सापकोटा ताप्केमा भकभकी पानी उम्लेको छ । त्यसमा एउटा भ्यागुता राखिदिँदा के गर्ला ? छट्पटिन्छ, सहनै नसकेर । तत्कालै उफ्रीएर भाग्ने कोसिस गर्छ । तर चिसो पानीको ताप्केमा भ्यागुता राखिदिएर मन्द आगोमाथी ताप्के बसालिदिनुस् त के...
एउटा फाउन्टेन पेनको जत्ति तौल भएको चरो । यति फुच्चे चरोले कहिँ कतै एक पटकपनि नरोकिकन, केहि नखाईकनै दुई हजार चार सय किमी भन्दापनि बढि उड्न सक्छ भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर बैज्ञानिकहरुले त्यो तथ्य प्रमाणित...
अक्टोबर १७, २०१५
साना किरा । हामीले यिनको ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने तरिका सिक्ने हो भने गज्जब उपयोगि हुने रहेछ । तर कति ब्यवस्थित यिनको ट्राफिक नियन्त्रण गर्ने तरिका । जब आहारा धेरै भेटिन्छ तब तिनलाई छिटो ओसारेर कमिलाले आफ्नो घरमा...
ब्वाँसो र भालुबिच अनौठो मित्रता
अगस्ट १७, २०१५
फिनिस फोटोग्राफर लासि रोतिनेनले अनौठा तस्विर लिएका छन् । भालु र ब्वाँसोबिचको गज्जबको मित्रता । ५६ वर्षिय रोतिनेन सिर्जनात्मक फोटोको खोजिमा हिँड्दा ग्रे वुल्फ भनिने पोथी ब्वाँसो र ब्राउन बेयर भनिने भाले भालुका बिचमा यो अनौठो मित्रता...
उड्दा उड्दै आहारा
जुलाइ १८, २०१५
पेरिग्रिन फाल्कोन भन्ने बाजको तस्विर हुन यी । अमेरिकाको ‘कोर्नेल बर्ड्स अफ नर्थ अमेरिका’ का ग्रेग थमसन एक दिन पन्छी अवलोकनमा हिँडेका थिए । एउटा तालको छेउमा पुग्दा उनले अली माथि आकाशमा पेग्रिन फाल्कोन भन्ने यो वाज...
फ्रान्सेली नजरमा चितवन
जुन ५, २०१५
गत साल फ्रान्सेली अध्ययनकर्ता अमेरिक फारली नेपाल गएका थिए । खासगरी नेपालको सामाजिक र क्रिषी बनोटको अध्ययन गर्न । त्यही बेला उनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सेरोफेरोमा पनि निकै रमाए । चितवन राष्ट्रिय निकुञजका जिवजन्तु र प्राकृतिक स्वाद...
गौतम उदय / अमेरिका करिब ४ अरब ५७ करोड बर्ष पहिले बिभिन्न ग्यास र अन्य पदार्थका ठोस कणहरु बोकेको नेबुला (Nebula) नामक बिशाल बादल अगाडि बढ्दै गर्दा आफैले आफ्नो तौल धान्न नसकी बिचमा भित्रतर्फ भासिएर गुरुत्वाकर्षणको कारणले...
अप्रिल ३०, २०१५
ददि सापकोटा भूकम्प जानु पहिले जनावरहरूले असाधारण क्रियाकलाप देखाएको पत्ता लगाएका थिए, रोमन इतिहासविद् आएलियनले। त्यो क्राइस्ट जन्मनुभन्दा ३ सय ७३ वर्षअघि नै थियो। कुनै बेला कोरिथियन खाडीको समुद्री किनारमा अवस्थित हेलिके सहरमा भूकम्प जानु पाँच दिनअघि...
नाचे झैं गरेर पोथी फकाउने कस्तो काईदा !
अप्रिल १५, २०१५
झट्ट हेर्दा नाचे जस्तो देखिन्छ । तर होइन । यिनीहरुले पोथीकालागि मारमुंग्री गरेका हुन । म्रिगहरुको लड्ने अनेक तरिका मध्ये योपनि एक हो । लुटे भालेहरु यस्ता बलियाको लडाईं देखेपछि परै भागछन । कि अली परबाट लुकेर...